Iji Social Networks maka CRM | Martech Zone
Iji netwọkụ mmekọrịta maka CRM
Tuesday, February 2, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Michael Reynolds kwuru
Dị ka Dr. Ivan Misner si kwuo, nna BNI, Ngwa CRM kachasị mma bụ nke ị ga-eji. Nke a bụ ụzọ dị mma isi kwuo na mmemme CRM na atụmatụ niile dị n'ụwa agaghị eme ihe dị iche ma ọ bụrụ na sọftụwia gị dị oke mgbagwoju anya ma ọ bụ na ọ nweghị ihe ọchị iji. Maka nke a, amaara m ọtụtụ ndị na-enweta ihe mpempe akwụkwọ Excel. Ọ na-arụ ọrụ maka ha n'ihi na ọ dị mfe ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Agbanyeghị, kedu maka iji netwọkụ mmekọrịta maka CRM? O doro anya, mgbasa ozi mmekọrịta bụ mkpọtụ niile ugbu a na mgbe ụfọdụ a na-eji ya eme ihe n'ụzọ dị irè dịka ahịa ahịa mana mana maka iji ya eme ihe karịa nke ọma na ịdebe mmekọrịta ndị ahịa gị site na iji netwọk ndị a? Emeela m ụzọ ụfọdụ ebe a ị nwere ike iji nnukwu netwọkụ atọ (Facebook, LinkedIn, Twitter) maka CRM.
LinkedIn nwere atụmatụ akpọrọ Nhazi profaịlụ. Ngwaọrụ a na - enye gị ohere ịkewaa kọntaktị gị na folda, gbakwunye ndetu na ozi kọntaktị ndị ọzọ, yana chọọ nyocha maka ịchọta ndị na - arụ ọrụ na otu kọntaktị. Onye nhazi Profaịlụ bụ akụkụ nke akaụntụ azụmaahịa LinkedIn, nke na-efu $ 24.95 kwa ọnwa. Site na Onye Nhazi Profaịlụ, ị nwere ike ịkọwa kọntaktị gị n'ime ndị ahịa, atụmanya, ndị a na-enyo enyo, wdg, ma soro ha kwukọrịta site na LinkedIn yana soro mmelite kachasị na ndị ọkachamara ha.
Facebook enye a mara mma dị mfe ụzọ nke categorizing kọntaktị gị, dị ka mma. Nanị ike a ndepụta enyi ma tinye ndị ahịa gị na ndepụta ahụ. You nwere ike ịtọ nhọrọ nzuzo maka ndepụta ahụ, yana. Nwere ike ịmepụta ndepụta maka ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ kewaa ha na atụmanya na ndị ahịa. Ihe dị mma gbasara Facebook bụ na ọ na-enye gị windo bara ụba na ndụ nke kọntaktị gị, nke na-ahapụ gị ịmalite mkparịta ụka dị mfe karị. Ọ na-emekwa ka ọ dịrị ya mfe ịkọrọ ndị ahịa gị ozi bara uru ma na-eme ka ị hụ ha.
Twitter nso nso a tinye a depụtara atụmatụ nke na-enye gị ohere ịmepụta listi na-enweghị njedebe nke ịkọwa ndị mmadụ (na ụlọ ọrụ) ị na-eso. Nke a bụ ohere dị ukwuu iji mepụta ndepụta nke ndị ahịa gị wee soro oge na-esochi ihe ha na-eziga ka ị nwee ike ịza ajụjụ, re-tweet maka ha, ma mara etu esi aga na ndụ ha na ụlọ ọrụ ha. Enweghi ihe omuma karie na Twitter, ma o na-enye ihe ngosi mara nma nke oma n’ime ihe omume nke onwe na nke ndi okacha-amara. O doro anya na ndị ahịa gị ga-eji Twitter maka nke a ga-aba uru 🙂
Netwọk mmekọrịta ọ nwere ike dochie sọftụwia CRM ọkọlọtọ? Enwere ike n'ọnọdụ ụfọdụ, mana oge ụfọdụ, apụrụ m ịhụ ka ha na-agbakwunye data nchekwa data gị. Netwọk mmekọrịta na-enye anyị nchekwa data echekwara echekwa nke na-emelite na ezigbo oge yana ozi nwere ike ịba ezigbo uru maka ndị njikwa akaụntụ na ndị ọkachamara n'ahịa. Gini mere iji nke a wee jiri netwọkụ mmekọrịta na-emekọrịta ihe n'etiti ndị ahịa gị ma nye ọrụ ka mma?
Tags: BNIDọkịta Ivan MisnerFacebookIvan MisnerLinkedInelekọta mmadụ crmmmekọrịta ndị ahịa mmekọrịtaTwitter
Michael bụ President & CEO nke SpinWeb, ụlọ ọrụ dijitalụ na-enyefe ụlọọrụ web design ngwọta na digital marketing. Michael bụ Inbound Marketing Certified ma na-ekwu okwu mba na mmemme ụlọ ọrụ.
Webtrends gbara ume Reality Demo
Feb 2, 2010 na 6:47 PM
“Ngwa CRM kachasị mma bụ nke ị ga - eji? bụ ezigbo okwu na echere m na ọ na-eme ka isi okwu ahụ dị mma. Aga m agbakwunye ọnụego a na akwụkwọ m. Nke a bụ ihe si na akwụkwọ m na-ekwu maka otu m si eji Microsoft Outlook dị ka "Inbox Control Center na Dashboard" dị ka igbe aka email, wdg bụ "Real CRM" m. M na-eji, jikọta na ịzụlite maka Salesforce mana ezigbo ọrụ m bụ Microsoft Outlook. Ihe edere ga-egosi gị ogwe ngwaọrụ na ngwa mgbakwunye m na-eji emezu ihe dị n'elu.
Daalụ maka nnukwu post na see okwu!
Feb 2, 2010 na 10:17 PM
Chei, Michael! Nnukwu nchọta ... Echere m ma LinkedIn enweghị ike ịbụ onye na-egbu ahịa Salesforce! Akwa post!